UNHCR oo sheegtay Shan kun oo ruux inay dib ugu celisay Somaliya bilowga sanadkaan | Puntland Today
UNHCR oo sheegtay Shan kun oo ruux inay dib ugu celisay Somaliya bilowga sanadkaan
Posted on February 15, 2017 by Dal Joog	Dhadhaab-(P-TODAY)-Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR,ayaa sheegtay in dad ku dhow 5 Kun oo qof ay dib ugu celisay Somaliya labadii todobaad ee la soo dhaafay. Hay’adda waxaa ay sheegtay in intii u dhaxeysay 16-31-dii January ay Hay’adda celisay 4,753 qof ka hor inta Maxkamadda sare ee Kenya aysan diidin dib u celinta qaxootigaas oo ay sharci darro ku tilmaantay.
Wakiilka UNHCR u qaabilsan dib u celinta Qaxootiga Somaliya ayaa sheegay in ilaa 2014-kii ay Somaliya ku celisay 44,365 qof oo qaarna lagu qaaday diyaarad halka kuwo kalena lagu celiyay Baabuur oo dhulka la mariyay.
Meelaha ugu badan ee la dejiyay ayaa kala ah Gobollada Jubbooyinka iyo Gedo iyo Baay.
Toban duullimaad diyaaradeed ayey sheegtay in ay ku lug lkahaayeen dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee Dhadhaab.
Maxkamadda sare ee Kenya ayaa todobaadkii hore ku canaanatay Dowladda Kenya gefka ay ku heyso xuquuqda aadanaha,waxaana ay Maxkamadda amartay in aan dib loo celin Karin Qaxootiga Soomaalida ah.